ESI EWEPU ITUNES SITE NA ITUNES - ITUNES - 2019
N'ezie ọtụtụ ndị nwere mmasị na ajụjụ ahụ: olee otu ị ga-esi tinye egwu na vidio ahụ? N'isiokwu a, ị ga-amụta otu esi eme nke a na ngwa Sony Vegas.
Ịgbakwunye egwu na vidiyo dị mfe - na -eme ihe omume kwesịrị ekwesị. Site na enyemaka nke Sony Vegas Pro na nkeji ole na ole ị nwere ike itinye egwu na vidiyo na kọmputa gị. Mbụ ịkwesịrị ịwụnye nchịkọta vidiyo.
Wụnye sony vegas
Download faịlụ ahụ echichi. Wụnye usoro ihe omume na-eso ntuziaka ahụ. Ị nwere ike pịa bọtịnụ na-esonụ (Ọzọ). Ntọala nwụnye nkwụnye dị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Mgbe emechara ihe omume ahụ, malite Sony Vegas.
Esi tinye Sony Vegas tinye egwu n'ime vidio
Isi ihuenyo nke ngwa ahụ bụ ihe ndị a.
Iji tinye egwu na vidiyo, ị ga-ebu ụzọ tinye vidiyo n'onwe ya. Iji mee nke a, dọrọ faịlụ vidiyo na usoro iheomume, nke dị na mpaghara ala nke ebe ọrụ ahụ.
Ya mere, agbakwunyere vidiyo. N'otu aka ahụ, nyefee egwu na window ihe omume ahụ. A ghaghị igbakwunye faịlụ ọdịyo dịka egwu egwu dị iche iche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike gbanyụọ ụda mbụ nke vidiyo ahụ. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ na aka ekpe. Okirikiri egwu ga-agba ọchịchịrị.
Ọ na-anọgide na iji chekwaa faịlụ ahụ gbanwere. Iji mee nke a, họrọ Njikwa> Gụgharịa na ...
Vidiyo vidiyo na-emepe. Họrọ àgwà achọrọ maka faịlụ vidiyo a zọpụta. Dịka ọmụmaatụ, Sony AVC / MVC na ọnọdụ "Internet 1280 × 720". Lee ị nwekwara ike ịtọ ọnọdụ nzọpụta na aha faịlụ vidiyo.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịmị mma nke video ahụ a zoputara. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ "Dezie Template".
Ọ na-anọgide na-pịa bọtịnụ "Render", mgbe nke a gasịrị, nzọpụta ahụ ga-amalite.
Usoro ntanetị gosipụtara dị ka ụlọ mmanya. Ozugbo nzọpụta ahụ gafechara, ị ga-enweta vidiyo nke egwu kachasị amasị gị.
Hụkwa: Usoro kachasị mma maka egwu egwu na vidiyo
Ugbu a, ị maara otu esi tinye egwu kachasị amasị gị na vidiyo.